Wasaaradda Kalluumeysiga oo ka war bixisay Kalluun ku soo caariyay Xeebta Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Sarkaal katirsanaa Al-shabaab oo ku biirey ISIS
Dacwad laga soo Gudbiyey Trump
DEGDEG: Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo magacaabis iyo xil ka qaadis…
Maxaa ka dhacay Shabeelaha Hoose?
Dagaalo xoogan ayaa ka socda Gudaha Degaanka Tigray.
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda Kalluumeysiga oo ka war bixisay Kalluun ku soo caariyay Xeebta Muqdisho
Wasaaradda Kalluumeysiga oo ka war bixisay Kalluun ku soo caariyay Xeebta Muqdisho
Wasaaradda Kallumeysiga ee Soomaaliya ayaa faah-faahin hor dhac ah ka bixisay kalluun shalay kasoo caariyay Xeebta Magaalada Muqdisho.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Kallumeysiga, Maxamuud Sheekh Cabdullaahi oo la hadlay warbaahinta Qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in kalluunkaas uu kusoo caariyey Xeebta u dhaw Xerada Xalane, isla markaana aysan jirin meel kale oo lagu arkay.
Kalluunkaas oo aad u badnaa ayaa subaxii hore ee shalay lagu arkay Xeebta, waxuuna sheegay Agaasimuhu inuu yahay hal nooc oo yar-yar laguna magacaabo Ceydi, kaas oo kalluumeysatadu ay ku dabtaan kalluunka kale ee waaweyn oo uu sheegay inuu cuno.
Sidoo kale Agaasimaha ayaa sheegay in ay Wasaaradda Kalluumaysigu waddo baaritaan ku aaddan waxa sababay in kalluun intaas la’eg uu bannaanka u soo baxo.
Agaasimaha ayaa sidoo kale sheegay in ay Kalluunka ku jira Xeebaha Soomaaliya ka qaadayaan DNA-ga, si looga hor tago jillaabshada qarsoodiga ah, iyadoo sharciga lala tiigsan doono Dalkii lagu arko Dekadihiisa.
DEGDEG: Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo magacaabis iyo xil ka qaadis sameeyay.
Hargeysa- Goob Caafimaad oo Dab ka Kacay